साउदीमा अलपत्र ६ नेपाली युवा भन्छन् – ‘हाम्रो आवाज कसैले सुनेन ! - jagritikhabar.com
साउदीमा अलपत्र ६ नेपाली युवा भन्छन् – ‘हाम्रो आवाज कसैले सुनेन !
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरब पुगेका ६ नेपाली युवा अलपत्र परेका छन् । ३३ महिनादेखि साउदीको जेद्धास्थित मोहम्मद एचके ट्रेड कम्पनीमा कार्यरत रामेछापका राजकुमार श्रेष्ठ, र गुणराज तामाङ, सिन्धुपाल्चोकका सुनिल तामाङ र रामकुमार पुरी, नवलपरासीका उमेश महतो तथा अर्का जितेन्द्र केवट अलपत्र परेका हुन् ।
अहिले झन्डै दुई महिनादेखि काम विहीन भएर बसिरहेको अलपत्र परेका मध्ये रामेछापका राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ३१ महिनाको करार अवधि सकिए पनि आफूहरूलाई घर नपठाएर कम्पनीले साढे तीन महिनाको तलब रोकिदिएको उनले बताए ।
‘हामी यहाँ अलपत्र परेका छौँ,कम्पनीले अब चाँडै पठाउँछौ मात्र भन्छ’ श्रेष्ठले खबर हबसँग भने , एक हप्ता भयो कम्पनी अर्कै ठाउँ सरेको खबर छ, कोही हेर्न पनि आएको छैन, अब हामी के खाने ?’ आफूहरूलाई पठाउने म्यानपावर कम्पनी त्रिवेणी ओभरसिजलाई उद्धार गर्न पटक-पटक सम्पर्क गरे पनि उसले चासो नदिएको श्रेष्ठले गुनासो गरे ।
जेद्धामा रहेको महावाणिज्य दूतावासमा पनि धेरै पटक आफूहरूको समस्या लिएर गएको तर, हुन्छ, हुन्छ भन्ने जवाफबाहेक केहि नपाएको उनीहरुको भनाई छ । आफूहरूको कुरा कसैले नसुनेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
काठमाडौँस्थित श्रम मन्त्रालय तथा वैदेशिक रोजगार विभागमा समेत आफूहरूको उद्धारको माग गर्दै निवेदन दिएको पनि एक महिना भन्दा बढी भएको उनले बताए । श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र दूतावास र धाउँदासमेत आफूहरू घर फर्कने वातावरण नबनेपछि उनीहरूले सबै सरोकारवालालाई घर फिर्ताका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।